Dawnmanhon( ဒေါင်းမာန်ဟုန် ): June 2008
စစ်အစိုးရရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့် အလှူရှင်နည်းပါးသွား
နာဂစ်ဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်း တိုက်ခဲ့အပြီး ၂ လနီးပါးကြာတဲ့ အချိန်အထိ ဒုက္ခသည်အများစုဟာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆင့်ထက် ကယ်ဆယ်ရေးအဆင့်မှာပဲ ရှိနေပါတယ်။
ဒါတွေဟာ အလှူရှင်တွေက နဂိုက စီးပွားရေး အဆင်မပြေကြတဲ့အချက်နဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သူတွေ ကယ်ဆယ်ရေး မြန်မာစစ်အစိုးရက ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေက အာအက်ဖ်အေကို ပြောပြပါတယ်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းတဦး။ ။ "အသွားတော့ ကိုယ့်အလှူကိုယ် မှတ်တမ်းတင်ချင်ဖို့နဲနဲ အခက်အခဲရှိလာတယ်။ နောက်ပြီးရွာတွေမှာ ချထားတဲ့ လုပ်အားပေးဆို ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ချထားတဲ့ကြံ့ဖွတ်တွေ အကုန်လုံးက များသောအားဖြင့် ထောက်လှမ်းရေးတွေ များတယ်၊ ကိုယ်လှူတာကိုယ် ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်တောင်မှ မရိုက်ပါနဲ့ဆို တားတာတွေရှိတယ်လို့ကြားရတယ်၊ အခုဟာက ကင်မရာကိုင်တဲ့သူဆိုရင်လည်း သိပ်မင်္ကာပဲ စွပ်စွဲပြီးတော့ ဖမ်းနေတာ မေးနေတာတွေများတယ်။"
ဒီအကြောင်းတွေကို စုစည်းပြီး မျက်မှောက်ရေးရာ သုံးသပ်ချက် အဖြစ် ဦးကျော်မင်းထွန်းက တင်ပြထားကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:30 PM0comments
သခင်သိန်းဖေမှ နအဖသို့ ပေးစာတစောင်
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:10 PM0comments
အထိန်းသိမ်းခံ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ထောင်ထဲမှာ မကျန်းမမာ
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 5:35 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကြောင်း ရုပ်ပြကာတွန်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေ
ဂျပန်ကာတွန်းပညာရှင် Akazu Mizuha သည် ၁၉၉၄ခုနှစ်က ဂျပန်ဘာသာဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း ကာတွန်းရေးဆွဲထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကာတွန်းစာအုပ်၏အမည်မှာ ဂျပန်ဘာသာဖြင့် tatakau kujaku၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်် The Fighting Peacockဟုအမည်ရပါသည်။
(၁၉၉၁)ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် အဖမ်းဆီးခံရနေရစဉ် ကမ္ဘာ့ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိခဲ့သည့်အကြောင်း၊ သူမ၏ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးအတွက်မဆုတ်မနှစ်၊ အနှစ်နာခံကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မှုများကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ၎င်းကာတွန်းကို ၁၉၉၄ခုနှစ်က ရေးဆွဲခဲ့ကြောင်း Akazu Mizuhaကပြောပါသည်။
အနှစ် (၂၀) ကျော် ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သောလည်းယခုအချိန်ထိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားထောင်ပေါင်းများစွာ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း နေအိမ်တွင် အဖမ်းဆီးခံရဆဲဖြစ်သည်။
ယခုအခါတွင် ၎င်းစာအုပ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်၍ ပထမဦးဆုံးပြန်လည်ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ပါသည်။ Fighting Peacock ကို ဖတ်ရူအားပေးလိုသူများ ဧရာဝတီ Online မှတဆင့် (၃)ဒေါ်လာဖြင့် ၀ယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်။ စာအုပ် ရောင်းချရရှိသောငွေများအား မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ရံပုံငွေအဖြစ်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
source ။ ။ Iraawaddy
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:48 PM0comments
- ၈၈ အနှစ် ၂၀ -
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 3:47 PM0comments
စစ်အစိုးရမှ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေထပ်တိုး
The number of dead following that massive cyclone in Myanmar continues to rise. The country's military government announced on Tuesday that the death toll has now topped 84,000. (June 24)
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 10:14 AM0comments
ပါတီကို ထောက်ခံသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်မိမိယုံကြည်ချက်များကိုခေတ္တ
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 9:15 AM0comments
အသက်အန္တရာယ် ရင်းပြီး ကူညီနေကြသူများအား ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်။
ပေးပို့သူ။ ။ ကိုခိုင်
ဘူးသီးတောင် အခြေစိုက် စကခ ၁၅ တွင် ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း တိုက်ပွဲတွင် စစ်သား ၆၀ ကျဆုံး
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင် အခြေစိုက် စကခ ၁၅ တွင် ၂၀၀၇-၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲများတွင် ကျဆုံးသူ စစ်သား အရေအတွက် ၆၀ ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ ကျဆုံးသွားသူ စစ်သားများမှာ စကခ ၁၅ လက်အောက်ခံ စစ်တပ် တပ်ရင်း ၁၀ ရင်းမှ ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ဘက် ကရင်နှင့် ရှမ်း ရှေ့တန်းနယ်မြေများတွင် ကျဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
များမကြာမှီက စကခ ၁၅ မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာ တစောင် အရ စကခ ၁၅ တွင် ၂၀၀၇-၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ရိုးရိုးသေဆုံးသွားသူ စစ်သား အရေအတွက်မှာ ၆ ဦးရှိပြီး တိုက်ပွဲတွင် ခြေနှစ်ဖက် ပြတ်သွားသူမှာ ၂ ဦး ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
၎င်းပြင် ခြေတဖက် ပြတ်သွားသူမှာ ၆၆ ယောက်ရှိပြီး မျက်လုံး တဖက် ကန်းသွားသူမှာ ၅ ဦးရှိသည်။ တိုက်ပွဲများ အတွင်း ဒဏ်ရာရပြီး မသန်မစွမ်း ဖြစ်သွားသူမှာ ၄၄ ဦးရှိပြီး ရိုးရိုး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသွားသူမှာ ၈၃ ဦးရှိကြောင်း အဆိုပါ အစီရင်ခံစာ၌ ဖေါ်ပြသည်။
အဆိုပါ စကခ ၁၅ အား ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်နိုင်မှ ဦးစီးကွပ်ကဲပြီး ယခုအခါ စကခ ၁၅ တပ်မှူးမှာ ကရင်ရှေ့တန်းသို့ရောက်နေကြောင်း သတင်း တရပ်တွင် ဖေါ်ပြသည်။
စကခ ၁၅ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများမှာ ခမရ ၃၅၂၊ ၃၄၅၊ ၃၅၃၊ ၅၃၅၊ ၅၅၁၊ ၅၅၂၊ ၅၆၄၊ ၅၆၅၊ ၅၃၆ နှင့် ၅၃၇ တို့ဖြစ်ကြပြီး အဆိုပါ တပ်ရင်းများ အားလုံးမှာ စစ်တွေမြို့ မြောက်ဘက် မိုင် ၈၀ အကွာတွင် တည်ရှိသော ဘူးသီတောင် မြို့နယ်တွင် အခြေစိုက်ကြသည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:07 AM0comments
မြို့တော်ခန်းမအနီး ဆန္ဒပြသူအမျိုးသမီး (၁) ဦးဖမ်းဆီးခံရ
NEJ / ၂၆ ဇွန် ၂၀၀၆
မြန်မာစစ်အစိုးရသည် ဆန္ဒပြသူများကို ပြင်းထန်စွာအရေးယူလေ့ရှိပြီး ယမန်နှစ် သြဂုတ်လက အမေရိကန်သံရုံးရှေ့၌ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြခဲ့သည့် ဦးအုန်းသန်းကို ထောင်ဒဏ်တသက် တကျွန်းချမှတ်ခဲ့ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ ခန္တီးထောင်၌ အကျဉ်းချထားခဲ့သည်။
Burma Redux: နားဂစ်မုန်တိုင်း ပုံရိပ်တစိတ်တဒေသ
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 7:50 AM0comments
လေဘေးဒုက္ခသည်များကို လက်မခံရန် မြ၀တီမြို့ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို ညွှန်ကြား
ဧရာဝတီ ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၀၈
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ လေဘေးဒုက္ခသည်များ လာရောက်တည်းခိုပါက လက်မခံကြရန် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သည့် မြ၀တီမြို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကို အာဏာပိုင်တို့က ညွှန်ကြားထားသည်ဟု ဒေသခံ များက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၄ ရက်မှစ၍ အာဏာပိုင်တို့က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကို ဒုက္ခသည်များအား လက်မခံရန် အကြောင်းကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ခံပါက ပြင်းထန်စွာအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း အမိန့်ထုတ်ထားသည်ဟု မြ၀တီမြို့ခံက ပြောသည်။
“ဧရာဝတီတိုင်းကလူတွေ မြ၀တီဘက်ကို ထွက်လာတာများတယ်လေ။ အဲဒါကို ဖြေရှင်းရတဲ့ပြဿနာတွေ များနေလို့ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို လိုက်တားတယ်။ ကြခတ်တော၊ ကိုးန၀င်းကျောင်းတွေကို အဓိကထား လိုက်ပြောတယ်” ဟု မြ၀တီမြို့ခံက ပြောသည်။
၎င်းအပြင် မဲဆောက်မြို့သို့သွားရာ လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ စစ်တောင်းတံတား၊ သံလွင်တံတားနှင့် ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်း ဆိပ်ကြီး၊ ကော့ကရိတ်တို့ရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် မုန်တိုင်းသင့်ဒေသမှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်သူများကို နေရပ်သို့ ပြန်ခိုင်းနေကြောင်း သိရသည်။
“တချို့ကျတော့လည်း ဘာမှတ်ပုံတင်မှမပါဘဲ ကားသမားကတဆင့် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီး လာကြတာပေါ့။ တချို့လည်း စစ်တဲ့အခါ အမှန်အတိုင်းပြောလိုက်လို့ နေရပ်ပြန်ပို့ခံရတယ်၊ ကြုံတဲ့ကားနဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပေါ့” ဟု မြ၀တီမြို့ခံက ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ရက် (အန်ဒီဒီ) အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာတစောင်၌ တနင်္သာရီတိုင်းရှိ ဇာဒက်ကြီးကျွန်းအနီးတွင် ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေးမြို့နယ်မှ လေဘေးဒုက္ခသည်တချို့ကို မြန်မာ့ ရေတပ်က ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
လေဘေးဒုက္ခသည်များသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများမှတဆင့် နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုးများနှင့် မဲဆောက်အခြေစိုက် မုန်တိုင်းကူည်ီရေးအဖွဲ့များကို ဆက်သွယ်ကာ ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုလဆန်းပိုင်းက လေဘေးဒုက္ခသည် တရာခန့် မဲဆောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဇာဂနာ ဘယ်ရောက်နေသည်ကို မသိရ
နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင် ဇာဂနာ၏ မိခင် ဒေါ်ကြည်ဦး၏ ပြောဆိုချက်ကို အောက်မှာနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ (dvb)
တပ်တွင်း ရာထူး အပြောင်းအလဲများ
တပ်တွင်း ရာထူး အပြောင်းအလဲများ ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
စဉ် အမည် မူလရာထူး ပြောင်းရွှေ့ ရာထူး
၁ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ြကီ်း ရဲမြင့် ကစထမှုး အငြိမ်းစား
၂ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်ထွေး တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ် အငြိမ်းစား
၃ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဝင်း ကစထမှုး အငြိမ်းစား
၄ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်မောင်သန်း ကစထမှုး အငြိမ်းစား
၅ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်ဘို ကစထမှုး အငြိမ်းစား
၆ ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်ဆွေ - ဝန်ကြီး ( ဆိုင်ကလုံး ကယ်ဆယ်ရေး နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာန
ရ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးသိမ်း စစ်ဦးစီးချုပ်(ရေ) ဝန်ကြီး ( စက်မှု (၂) ဝန်ကြီးဋ္ဌာန)
၈ ဗိုလ်ချုပ် စောလွင် ဝန်ကြီး ( စက်မှု (၂) ဝန်ကြီးဋ္ဌာန) ဝန်ကြီး ( လှုဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာန)
၉ ဗိုလ်ချုပ် အုန်းမြင့် တိုင်းမှုး ( မြောက်ပိုင်းတိုင်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (ကစထ)
၁၀ ဗိုလ်ချုပ် မင်းအောင်လှိုင် - ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (ကစထ)
၁၁ ဗိုလ်ချုပ် ကိုကို တိုင်းမှုး ( တောင်ပိုင်းတိုင်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (ကစထ)
၁၂ ဗိုလ်မှုးချုပ် ကျော်ဖြိုး ကျောင်းအုပ်ကြီး(စစ်ဦးစီး တက္ကသိုလ် -ကလော) ဗိုလ်ချုပ် (တိုင်းမှုး-တြိဂံတိုင်း-ကျိုင်းတုံ)
၁၃ ဗိုလ်မှုးချုပ် ရာပြည့် တပ်မှုး(အမှတ်(၁) စစ်မမြေပြင်ဆေးတပ်) ဗိုလ်ချုပ် (တိုင်းမှုး-အရှေ့ ပိုင်းတိုင်း- တောင်ကြီး)
၁၄ ဗိုလ်မှုးချုပ် စိုးဝင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး(စစ်ဦးစီး တက္ကသိုလ် -သံတောင်) ဗိုလ်ချုပ် (တိုင်းမှုး-မြောင်ပိုင်းတိုင်း-မြစ်ကြီးနား)
၁၅ ဗိုလ်ချုပ် လှဋ္ဌေးဝင်း တိုင်းမှုး-ရန်ကုန်တိုင်း ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ်)
၁၆ ဗိုလ်မှုးချုပ် ထူးထိန် ကျောင်းအုပ်ကြီး(စစ်သူနာပြု တက္ကသိုလ်) ဗိုလ်ချုပ်(ဒုတိယ တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ်)
၁၇ ဗိုလ်မှုးချုပ် ဝင်းမြင့် တပ်မမှုး(တပ်မ (၇၇)) ဗိုလ်ချုပ် (တိုင်းမှုး-ရန်ကုန်တိုင်း)
၁၈ ဗိုလ်မှုးချုပ် လှမင်း တပ်မမှုး(တပ်မ (၁၁)) ဗိုလ်ချုပ် (တိုင်းမှုး-တောင်ပိုင်းတိုင်း-တောင်ငူ)
၁၉ ဗိုလ်မှုးကြီး ထွန်းသန်း - ဗိုလ်မှုးချုပ် (တပ်မမှုး-တပ်မ (၇၇)
၂၀ ဗိုလ်မှုးကြီး သန်းထွတ် - ဗိုလ်မှုးချုပ် (တပ်မမှုး-တပ်မ (၁၁)
၂၀ ဗိုလ်မှုးကြီး တောက်ထွန်း - ဗိုလ်မှုးချုပ် (တပ်မမှုး-တပ်မ (၄၄)
၂၁ ဗိုလ်မှုးကြီး လှမြင့်ဆွေ တပ်မမှုး-တပ်မ (၄၄) ကျောင်းအုပ်ကြီး(စစ်သူနာပြု တက္ကသိုလ်)
၂၂ ဗိုလ်မှုးကြီး စန်းမြင့် - ဗိုလ်မှုးချုပ် (တပ်မမှုး-တပ်မ (၆၆)
၂၃ ဗိုလ်မှုးချုပ် မောင်မောင်အေး တပ်မမှုး-တပ်မ (၆၆) ကျောင်းအုပ်ကြီး(စစ်ဦးစီး တက္ကသိုလ်)
၂၄ ဗိုလ်မှုးချုပ် စန်းဦး OCSMA (2) ကျောင်းအုပ်ကြီး(စစ်ဦးစီး တက္ကသိုလ်)
၂၅ ဗိုလ်မှုးကြီး စိုးလွင် - ဗိုလ်မှုးချုပ် (ဒုတိုင်းမှုး-ရခိုင်-စစ်တွေ)
၂၆ ဗိုလ်မှုးကြီး အောင်စန်း - ဗိုလ်မှုးချုပ် (ဒုတိုင်းမှုး-ချင်း-ကလေးမြို့ )
၂၇ ဗိုလ်မှုးကြီး ကျော်နိုင်ဦး - ဗိုလ်မှုးချုပ် (စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်)
.NEJ/ ၂၃ ဇွန် ၂၀၀၈
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 7:46 AM0comments
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ 23 2008
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 7:43 AM 1 comments
ဧရာသတို့ သမီး နှလုံးသွေးပေါ်က လှေ အို တစင်း
အိပ်ပျော်နေဆဲ ဧရာသတို့ သမီးရဲ့ 
နလုံးသွေး မြစ်ပြင် ကြောမှာ
အတွေးအိုကပျက် နှစ်ချို့ ဝိုင်တကျိုက်နဲ့ 
လှော်ရင်း၊ မျောရင်း ၊ စားသောက်ရင်းပေါ့၊
မေးကြ ပြောကြ ၊ ရေးကြ တွေးကြ
ဆဲကြ ဆိုကြ ၊ငြင်းကြ ခုန်ကြ
ကွဲကြ ပြဲကြ .............
ကိုယ်သာတော် ခြေရင်လည်း အရင်ဦှး၊
အချင်းချင်းဂုဏ်တင် လှည့်လည် ယူ
တက်လူမရှိ ၊ နင်းချေကြရင်း
နံမည်ကို သတ် တံဆိပ်ကပ်ကြ
အချိန်တွေသာ တဖြေဖြေး ပြုန်း
ညနေဦး လေပြေ ကြားမှာ ….ကြယ်တပွင့်ကြွေသွားတယ် ။
အစာကပြတ်၊ ရေလည်းငတ်ကြ ၊
တွေးခေါ်နိမ့်ကျ၊ ဘ၀က ဆုံးပ
သေအံမှုးဆဲ၊ မီးဖွားမဲ့ သူ၊
နထ္ထိဆေးနဲ့ဟချာလောင်း အတတ်
ဤကမ္ဘာမှာရှား၊ ဤ နိုင်ငံလား၊
ခေတ်ခေါင်းဆောင် နဲ့ က၀ိအိုလည်း
အခန်းကျဉ်းထဲ ၊ ဝှေ့ လည့်ရင်းပေါ့
မိုးသက်ပြင့်းတေးသံ၊ ညည်းဆိုရင်းနဲ့ 
ညနှောင်း အိပ်မပျော်ခြင်းတ၀က်မှာ.... .ကြယ်တပွင့် ကြွေသွားတယ်။
အလုပ်လုပ် နေကြတယ်၊ ဘာတွေလုပ်နေသလဲ …
စီမံကိန်းချ နေကြတယ် ၊ ဘယ်တော့ စမှာလဲ…
အားလုံးလာမယ် ၊ တောင့်ကာထားတဲ့ 
မြေပုံ တောင် မကျော် ၊ အသံတွေကျော်
ဘယ်ကို ဘယ်တော့ ရောက်မှာလည်း။
အသွင်မတူ ဆင်မယောင်နဲ့ ၊ ပုံစံမတူ၊ နည်းဟန်မထူး
လမ်းကြောင်း ထွေပြား ၊
မဝေးခရီး လျှောက်လမ်းခဲ့ ကြ၊
ပြန်တွက်ကြည့် မဝေးခရီး နှစ် ၂၀
ဘယ်မှာလည်းဟဲ့ တူတယ် ဆိုယုံ
ဒီခရီးသမိုင်း ၊ မင်း ၊ငါ ၊ သူ ကိုယ် ရေးလို မရ
သမိုင်း မော်ကွန်း၊ ရေးသူရှိရဲ့ 
လုပ်သူ မှ မရေး ၊ ရေးသူ ကိုယ်မသိ ၊
ကိုယ့်ကို ကိုယ် နိုးထကြလို့ 
မနာလို၊ မပြိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ဖယ် ခွာ ကာထုပ်
နိုးထခြင်းတွေက အိပ်ပျော်ယောင်မဆောင် ဖို့ 
ဖေးမခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်း ……
မင်းလား ငါလား သူတဲ့ လား…
မိုးသောက်ရောင်ခြည် နိုးထ အင်အားနဲ့ 
တန်ဖိုးရှိ တဲ့ ကြယ်တပွင့် ပြိုကျ မသွားခင်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 7:59 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 7:38 PM0comments
ထိပ်သီးစစ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး စစ်တပ်ရာထူးမှ အနားယူ
သတင်း - ဗထူး (ရိုးမ ၃)၊ ဇွန် ၂၂-၂၀၀၈
မြန်မာစစ်အစိုးရ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးတို့နှစ်ဦး စစ်တပ်တွင် ထိန်းချုပ်ထားသည့် တာဝန်များမှ အနားယူ သွားသည်ဟု စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းက ယနေ့ပြောဆိုသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နေရာများမှ အနားယူကာ အခြားအဆင့်မြင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် အစားထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးနေရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့(ကစထ)မှူး တဦးဖြစ်သူ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေအား အစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့သည် ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် စစ်ဖက်အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
“တပ်ချုပ်နဲ့ ဒုချုပ်က တပ်အမိန့်ပုံစံမျိုးနဲ့ တပ်က အနားယူတဲ့သဘောပဲ၊ (နယက)ကောင်စီမှာ တော့ ဆက်ရှိနေမယ်၊ အရင် (ကစထ)မှူးတွေလည်း အနားယူတယ်ဆိုပေမဲ့ အဲ့ဒီကောင်စီမှာ ဆက်ပါနေအုံးမယ်၊ တပ်ချုပ်နဲ့ ဒုချုပ်က ရန်ကုန်ပြန်လာမယ်၊ သူတို့နဲ့အတူ (ကစထ)မှူးတွေ ထဲက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ခင်မောင်သန်းလည်း ပါလာမယ်၊ သူလည်း အနားယူပြီ”ဟု အဆိုပါတပ်မတော်အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ တောင်ပိုင်းတိုင်းနှင့် အရှေ့မြောက်တိုင်းမှ တိုင်းမှူးသုံးဦးမှာလည်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူးများအဖြစ် တဆင့်တိုးခန့်အပ်လိုက်ပြီး ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အများအပြား အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆို သည်။
“ဒါက တပ်တွင်းနေရာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တော့ သတင်းစာတွေကတော့ တရားဝင် ပုံ ဘယ်သူဘာညာဆိုပြီးတော့ ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ အရင် (ကစထ)မှူးဟောင်းတွေ နားတယ် ဆိုပေမဲ့ နိုင်ငံတော်ကောင်စီထဲမှာ ဆက်ရှိနေအုံးမယ်၊ ၂၀၁၀ ကျရင် နေရာယူမယ်လို့တော့ ခန့်မှန်းနေတာပဲ”ဟု ပြောသည်။
ယခုအပြောင်းအလဲများနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်တွင်းတင်းကြပ်နေသော ရာထူးနေရာအများအပြား အပြောင်းအရွှေ့များ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက် ရှေ့အလားအလာကို ခန့်မှန်းရခက်နေသေးပြီး အာဏာအရပ်ရပ်အား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဆက်လက်ထိမ်းနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းအချို့ အတွက် စဉ်းစားစရာဖြစ်နေသည်ဟု အဆိုပါစစ်ဘက်အရာရှိက ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 4:54 PM0comments
Home. အိမ် သီချင်း
( နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံစားခဲ့ရသော ကလေးငယ်များကို ရည်ရွယ်ပြီး ဒီသီချင်းလေးကိုနားထောင်စေချင်ပါတယ်။)
ကမ္ဘာမြေမှာ ခိုလှုံရာ ခေါ်ဆိုတဲ့ အိမ်၊
ရံရွေလယ်၊ ထယ်ဝါစွာ ဆင်စွယ်နန်းအိမ်၊
ကျူထရံတွေ ကာရံကာ ဓနိမိုးအိမ်၊
ကမ္ဘာမြေကို ဖြူစင်စွာ အကြင်နာမျှဝေ၊
ဆည်းလည်းသံ လှိုက်ခတ်စေ ဒီချစ်ခြင်းတွေ၊
ကမ္ဘာမြေမှာ အိမ်တစ်အိမ် ဆောက်ကြမယ်လေ။
ကမ္ဘာမြေမှာ ညင်သာစွာ စီးဆင်းဖို့လေ...။
အိမ်အပြင်မှာ ၀ါပင်တွေ ကိုယ်တိုင်စိုက်မယ်၊
ကိုယ်တိုင်ငင် ၀ါချည်မျှင် ဖျင်တဘက်ရယ်...။
အိမ်အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင်ထွန် ကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့
စပါးရိတ်ချိန် ၀ိုင်းဖွဲ့မယ် ဆန်အရက်ရယ်...။
ဒီအချိန်ဆို အိမ်ကပြင်မှာ ကဗျာတွေရွတ်မယ်။
ရင်ခွင်မှာ ကြင်နာသူ ချိုအနမ်းရယ်...။
ချစ်မိတ်ဆွေ စည်းချက်ညီ အတူတူ က မယ်။
ရင်ခွင်မှာ ရှင်သန်ရာ မှီခိုရာ အိမ်တစ်အိမ်ကို ကမ္ဘာမြေမှာ တည်ဆောက်ကြမယ်။
အဆောင်အယောင်တွေ မဆင်ရင်စေ ရင်ခွင်အိမ်ပျော်ရွှင်ပါစေ...
ဒဏ္ဍာရီရာဇ၀င်လို ၀ိဥာဉ်အိမ် စိန်စီရာ ရတနာခြယ် သိင်္ဂါရီအိမ်...။
တစ္ဆေတစ်ကောင် ဟန်ဆောင်သလို မာယာကင်းမဲ့
မနာလိုတဲ့ မစ္ဆရိယ ချည်နှောင်မှုမဲ့
ရဲရင့်လိုက် ချစ်တဲ့အိမ် တို့ဆောက်ကြမယ်။
(ကလေးလေးတွေ နွေးထွေးဖို့လေ...) x ၂
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:25 PM 1 comments
မုန်တိုင်းဘေးသင့်သူတွေကို ဆက်လက်ကူညီဖို့ သီတဂူဆရာတော်ကြီး တိုက်တွန်း
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက် စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှု ပြတ်လတ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက် အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကို အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သီတဂူဆရာတော်က ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက အလှုရှင်တွေအနေနဲ့ ရေရှည် ဆက်လက်ပြီး ကူညီရေး၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် ရေရှည် လှူဒါန်းမှုတွေ လုပ်ဆောင် သွားကြဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ တိုက်တွန်း တော်မူလိုက်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာအက်ဖ်အေ ဒေါ်အင်ကြင်းနိုင်က သီတဂူဆရာတော် ဦးညာဏိဿရကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း လျှောက်ထားတာကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။(RFA)
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:17 PM0comments
ဖန်တီးသူ - J J
သံစဉ်၊ စာသား၊ ရေးသား၊ တီးခတ်၊ သီဆို သူ - မျိုးချစ်မြန်မာ
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 9:09 AM0comments
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အထူးတောင်းဆိုကြေညာချက်။
Read this document on Scribd: 198m9f5dquexql4n6i23
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:06 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:14 PM0comments
ငွေကြာယံတွင်အရိုက်ခံခဲ့ရသည့် အမျိုးသားတဦး သေဆုံး
ဗထူး။ ဇွန် ၂၀၊ ၂၀၀၈
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလ သံဃာနှင့် ပြည်သူလှုပ်ရှားမှု မြင်ကွင်းတနေရာ
ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက ရန်ကုန်မြို့၊ ငွေကြာယံဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆန္ဒပြမှုအတွင်း ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသူ အမျိုးသားတဦး နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့များမှ ဝါးရင်းတုတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ကာ ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီး ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာခဲ့သူ ကိုကျော်ကျော်သည် နေအိမ်တွင် ကာလရှည်ကြာစွာ ဆေးကုသခဲ့ပြီးနောက် ဦးခေါင်း တွင် ပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့သည့် ဒဏ်ရာဖြင့် ယခုလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားခြင်းဖြစ် သည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ အမှတ် (၁၂) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ ကိုကျော်ကျော်အား ပြီးခဲ့ သည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့က ငွေကြာယံဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့တွင် သံဃာတော် များအား ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းအား ဖျက်ဆီးသွားသည့်အပေါ် ဒေါသထွက်နေသည့် ဒေသခံပြည်သူများအား စစ်အစိုးရက ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့သည့်အချိန်တွင် စတင်ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီး သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“သူ့အသက်က (၃၂) နှစ်ပါ၊ အလုပ်အကိုင်က နွားမွေးတယ်၊ ဆန္ဒပြတဲ့အထဲမှာတော့ မပါဘူး၊ ဖြစ်တုန်းက သူက ငွေကြာယံဘေးနားက ဦးဖေသိန်းလျှပ်စစ်ဆိုင်နားမှာ ထိုင်နေတာ၊ ဆန္ဒပြ တော့ သူက အဲမှာပဲ ထိုင်နေတာ၊ နောက် ညနေ (၅) နာရီလောက်မှာ တော်တော်ဆိုးလာတယ်၊ သေနတ်တွေပစ်ဖောက်၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေခွဲပြီး လိုက်ဖမ်းပြီးတော့ ရိုက်တာ၊ အဲ့ဒီမှာတင် သူ့ကို ရိုက်ပြီး ဖမ်းသွားတာ”ဟု မိသားစုနှင့်နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
နောက်လ အောက်တိုဘာလ (၅) ရက်နေ့တွင် အမှတ် (၁၂) ရပ်ကွက်မှ ရယကဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ ဝင်များက ကိုကျော်ကျော် အရူးထောင်တွင်ရောက်နေကြောင်းနှင့် မိဘများ သွားရောက်တွေ့ဆုံ ကာ ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်သည်ဟု အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
စစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့များက ကိုကျော်ကျော်အား ဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက် ကျိုက်က္ကဆံစစ်ကြောရေး စခန်းတွင် ပြင်းထန်စွာ ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသည့် ဒဏ်ရာကြောင့် ဦးခေါင်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့ စံပြဆေးရုံတွင် ကာလကြာမြင့်စွာ မိသားစုက ငွေကြေးကုန်ကျခံ ကုသခဲ့ရသည်။
“သွေးတွေ ခဏခဏအန်တော့ ဆေးရုံခဏခဏပို့ထားရတယ်၊ အဲလိုဖြစ်နေရင်း (၁၈) ရက်နေ့၊ ည (၉) နာရီမှာ ဆုံးသွားတာပါ၊ ငွေလည်း တော်တော်ကုန်တယ်၊ ဆေးရုံက ဆရာဝန်တွေက နောက်ဆုံး မရတော့ဘူးပဲပြောပါတယ်၊ အတွင်းကြေကြေတယ်၊ ခေါင်းမှာလည်းထိတယ်လို့ပဲ ပြောတယ်၊ အရူးထောင်မှာလဲ (၇) ရက်လောက်ကြာတယ်၊ မိဘတွေကတော့ လုံးဝမကျေနပ် ဘူး၊ ကြောက်လဲကြောက်နေကြတော့ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီး ရင်ထုမနာဖြစ်နေကြတယ်လေ”ဟု (၁၂) ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူတဦးက ပြောသည်။
အဖ ဦးစိုးသန်း၊ အမိ ဒေါ်မြမြသန်းတို့နှင့်အတူ အိမ်အမှတ် (၂၅၇)၊ အမှတ် (၁၂) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ ကိုကျော်ကျော်၏ရုပ်အလောင်းအား နေအိမ်တွင် ၅ ရက်ထားပြီးမှ မီးသင်္ဂြိုလ်မည်ဖြစ် သည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သံဃာနှင့် ပြည်သူ များ၏ ဆန္ဒပြမှုအား အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ရာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများအား ညအချိန်တွင် ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးနောက် သံဃာတော်နှင့် ပြည်သူအများအပြားကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:10 PM0comments
ဇွန်လ (၁၉)။ တိုကျို
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 10:05 AM0comments
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အမြန်ဆုံးခေါ်ယူ ဖွဲ့ စည်းပေးပါတဲ့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနားသို့ စွမ်းအားရှင်များဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး
ပီတာအောင်/ ၁၉ ဇွန် ၂၀၀၈ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုဌာနချုပ်၌ ယနေ့နံနက်တွင် ကျင်းပသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ (၆၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲသို့ စစ်အစိုးရလက်သပ်မွေးထားသည့် စွမ်းအားရှင်နှင့် ကြံ့ဖွံ့ များက ၀င်ရောက်ရိုက်နှက်ပြီး လူ (၄) ဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီက ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟန်းမြို့နယ် လူငယ်အတွင်းရေးမှူးနှင့် မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ
ဗီဒီယို ရိုက်ကူးသူ ဦးထွန်းမြင့်၊ လှိုင်သာယာမှ ဦးလှအေး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှ ကိုမောင်မောင်သိန်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တဦးတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ သံဃာတော်တပါး ဖမ်းဆီးခံရသည်ဟု သတင်းထွက်နေ သော်လည်း အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အမျိုးသမီးငယ်တဦး အရိုက်ခံရပြီး ဒဏ်ရာရရှိ သွားကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:06 AM0comments
Mr. Creator ရဲ့ အမေ့အတွက် အမှတ်တရ
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:46 AM 1 comments
မကြာခင် မြောင်းထဲရောက်တော့မယ့် သူများ
Daw Aung San Suu Kyi Birthday celebration in Korea
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:15 AM0comments
•နိုင်ငံတကာသတင်းဆိုသည်မှာ CCTV ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
•အခြားနိုင်ငံမှ မိမိထံလာပါက "ဂါဝရပြုတွေ့ဆုံ"ရန်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ၊မိမိကသွားရသူဖြစ်ပါက "သွားရောက်တွေ့ ဆုံ" ဟုသုံးစွဲရသည်။
•သတင်းကြော်ငြာနေစဉ် နောက်မှလူတစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ မှအလုပ်ရှုပ်ဟန်ဆောင်ပြရသည်။(ဥပမာ ကျောပေး၍တောင်ခြစ်မြောက်ခြစ်လုပ်နေရန်)
•နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းဆိုသည်မှာ "တရုတ်" သို့မဟုတ် "ကိုရီးယား" ဇာတ်လမ်းများကို ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
•နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများသည် "လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်စွက်မှာကြား၍ပြန်လည်ထွက်ခွာ" သွားသူများသာဖြစ်ကြသည်။
•ပြည်သူလူထုဆိုသည်မှာ "အဖြူနှင့်အစိမ်း" သို့မဟုတ် “အဝါရောင်ဝမ်းဆက်” သို့မဟုတ် “အပြာရောင်ဝမ်းဆက်" များသာ ဝတ်ဆင်ကြသည်။
•မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ကြီးမားလွန်းသဖြင့် နေ့မအားညမနား အနှစ် နှစ်ဆယ်နီးပါးတည်ဆောက်သော်လည်း လမ်း၊တံတားများ ဆောက်၍မကုန်နိုင်။
•နိုင်ငံတော်၏အသုံးစရိတ် နှင့်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း သည်ပြည်သူများအားထုတ်ပြန်ရန်မလိုအပ်ချေ။(ဝါ) အသိပေးရန်မလိုအပ်။
•စစ်သားများပင်ဖြစ်လင့်ကစား နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ သည် လယ်ယာလုပ်ငန်းမှအစ ပိဋိကတ်သုံးပုံးအဆုံး ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်ကြရာ ဝိနည်းတော်နှင့်အညီ နေထိုင်နိုင်ရန် ရဟန်းများအားညွှန်ကြားနိုင်သည်။
•မည်သည့်အခါမှ အစိုးရနှင့်ပြည်သူ သဘောထားကွဲလွဲမှုများမရှိသော်လည်း "ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး"ဆိုသည့်လူနည်းစု အတွက် မြန်မာ့အသံမှ "စစ်မှန်သောမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်" ဆိုသည့်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုလွင့်ထုတ်ပေးနေရသည်။
•နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ ဘုရားကျောင်းကန်တက်ခြင်း သည် သတင်းထူးဖြစ်သည်။
•ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနှင့်ဆရာ၊ ဆရာမ များသည် ပညာရေး၏အရေးပါပုံကို မသိကြချေ။နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများက ရံခါမလပ်
•အမြဲကြားရလေ့ရှိသည့်စကားလုံးများ"ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း နှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီဆောင်ရွက်ခြင်း"
•အမြဲ မကြားရ သောစကားလုံးများ "စီးပွားရေးကျဆင်းခြင်း ၊ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာ သွားခြင်း"
•မေးခွန်းနှင့်အဖြေ မှန်အောင်မဖြေ နိုင်ပါက ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဖြစ်နိုင်သည်။ (မှတ်ချက်။ ဥပဓိကောင်းရန်မလို။)
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:58 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:52 PM0comments
Scrambling for classrooms in Myanmar
June 11: Teachers in cyclone stricken Myanmar search for books and classrooms. Msnbc.com's Dara Brown reports.
ကိုသက် ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၀၈
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 10:39 PM0comments
လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သူ အယ်ဒီတာ ဇော်သက်ထွေး ဖမ်းဆီးခံရ
သတင်း - ဗွီအိုအေ
လေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း တပိုင်တနိုင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူ တဦးဖြစ်တဲ့၊ အားကစားဂျာနယ် အယ်ဒီတာ ကိုဇော်သက်ထွေးကို အာဏာပိုင်တွေက မကြာသေးခင်ကပဲ ထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ နီးစပ်သူ မိတ်ဆွေတွေက ပြောပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေဖက်က ကူညီကယ်ဆယ်ရေး အလုပ်တွေ လုပ်နေသူတွေကို အဖမ်းအဆီးတွေ လုပ်နေတဲ့အထဲမှာ ဒါဟာ နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြပေးပါမယ်။
လေမုန်တိုင်း ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေအတွက် တပိုင်တနိုင် အကူအညီပေးနေတဲ့ အားကစားဂျာနယ် အယ်ဒီတာ ကိုဇော်သက်ထွေးကို အာဏာပိုင်တွေက ဒီတပတ်ထဲမှာပဲ ဖမ်းဆီးလိုက်တာလို့ သူနဲ့ ရင်းနှီးသူ စာပေမိတ်ဆွေ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောပြကြတာပါ။ မကွေးမြို့က မိခင်ဖြစ်သူနေအိမ်မှာ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် အခုဆိုရင် ကိုဇော်သက်ထွေးကို ရန်ကုန်မြို့က စစ်ကြောရေးစခန်းတခုမှာ ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်က ပြောပြပါတယ်။
"ကိုဇော်သက်ထွေးနဲ့ ကိုငှက်ပျောကြော်တို့ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ကြတယ်။ လုပ်ရင်းနဲ့ ၁၂ ရက်နေ့က မကွေးက သူ့အမေအိမ်ကို သွားရင်းနဲ့ မကွေးမှာ ဖမ်းပြီးတော့ သူ့ကို ၁၃ ရက်နေ့က အောင်သပြေကို ပို့လိုက်တယ်။ ဖမ်းတယ်ဆိုတာပဲ သိရတယ်။ ဘာကြောင့် ဖမ်းတယ်ဆိုတာ မေးလို့မရဘူး။ ဖမ်းတဲ့အဖွဲ့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘာကြောင့်ဖမ်းမှန်းမသိဘူး။ ဖမ်းဆိုလို့ ဖမ်းလိုက်တာပဲ။ မကွေးက သူ့အမေအိမ်မှာ အဖမ်းခံရတယ်။"
ဒီလို အာဏာပိုင်တွေဖက်က ဘာအကြောင်းကြောင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာ ရှင်းလင်းပြောဆိုတာမျိုး မရှိပေမယ့် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကိုဇော်သက်ထွေးရဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ဆက်စပ် ပတ်သက်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆနေကြတာပါ။
"ဒီ လူမှုရေးပေါ့နော်။ ကိုယ်ကျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါဟာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ လူတွေကို ကူညီတာပဲ။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ကူညီတာ။ ကိုယ့်မှာရှိသမျှ ခွန်အားရော၊ ငွေအားရော၊ လူအားရော အကုန်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ ဒါကို အများအတွက် ဆောင်ရွက်တာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ ဒီဟာ အနုပညာရှင်တွေနဲ့လည်း သူလုပ်တယ်။ နောက်တချက်က သူက ၈၈ မျိုးဆက်သစ်ဆိုတော့ သူတို့ ဒီလိုလုပ်တာ မကြိုက်လို့လား။ ထင်ပေါ်သွားလို့လား။ ကျနော်တို့ဖက်က တွေးစရာတွေ အများကြီးပဲလေ။ သူတို့ ဒီလို လှုပ်ရှားမှုက သူတို့အတွက် သိက္ခာကျတယ်လို့ ယူဆပြီး သူတို့ ဖမ်းတာလို့ပဲ ကျနော်တို့ ထင်တယ်ဗျာ။"
ဒါဟာဆိုရင် လေဘေးကူညီ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေ အဖမ်းအဆီးခံနေရတဲ့ အထဲက နောက်ဆုံးကြားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ထဲတုန်းကလည်း မုန်တိုင်းဘေးသင့်သူတွေကို စေတနာ့ဝန်ထမ်း အကူအညီတွေ ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံကျော် လူရွှင်တော် စွယ်စုံအနုပညာရှင် ဇာဂနာ ခေါ် ကိုသူရကို အာဏာပိုင်တွေက ထိန်းသိမ်းထားတာပါ။ အခုဆိုရင် သူ့ကိုလည်းပဲ ရန်ကုန်မြို့က ဒီအောင်သပြေ စစ်ကြောရေး စခန်းမှာပဲ ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်း မိသားစုနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။ အခုလို လူမှုရေး အကူအညီတွေကို တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကိုဇော်သက်ထွေးတို့လို လူတွေကို ထိန်းသိမ်းခံရတာဟာ ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက် ထိခိုက်နစ်နာစေတယ်လို့လည်း ရှုမြင်ကြတာပါ။
"ကိုဇော်သက်ထွေးကတော့ သူ စပြီးတော့ နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီး လူတွေ ဒုက္ခရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက သူ အားကျိုးမာန်တက် တနေရာပြီး တနေရာ အဲဒီလို ပစ္စည်းတွေ စုဆောင်းပြီးလိုက်ပို့၊ အဲဒီလိုတွေတော့ သူ အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်နေတယ်ဗျာ။ သူ ရက်နားတာတောင် သိပ်မတွေ့ရဘူး။ ဒီလို လူမျိုးတွေကို ဒီလိုလူမှုရေးကို အကြိတ်အနယ် လိုက်လုပ်နေတဲ့ သူတွေက ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ရင် အရမ်းနည်းတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူနည်းတဲ့အချိန်မှာ ဒီလို စိတ်ပါလိုက်ပါနဲ့ ခွန်တိုက်အားတိုက်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ လုပ်နေတဲ့ သူတယောက် ဆုံးရှုံးသွားတာဟာ ကျနော်တို့ လုပ်နေတဲ့သူတွေ အတွက်ကတော့ အကြီးအကျယ် ဆုံးရှုံးမှုလို့ ယူဆရပါတယ်။"
ရန်ကုန်မြို့ စာပေအသိုင်းအ၀ိုင်းက ကိုဇော်သက်ထွေး နဲ့ နီးစပ်သူ မိတ်ဆွေတဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဇော်သက်ထွေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံက အဓမ္မလုပ်အားပေး ခိုင်းစေမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO) ကို တိုင်ကြားမှုအတွက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်းကလည်း တသက်တကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရဖူးသူ တယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်း ILO ရဲ့ ဖိအားပေး ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ရှိလာတဲ့နောက် ၂ နှစ်လောက်အကြာမှ အာဏာပိုင်တွေက သူ့ကို ဖမ်းဆီးရာက ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 4:10 PM0comments